विवेक बिजुक्छे | गृहपृष्ठ
Home यातायात विवेक बिजुक्छे
महाप्रबन्धक, पूजा इण्टरनेशनल नेपाल प्रालि
सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने गरी ब्राण्डिङको तयारीमा छौं
सन् १९३९ मा डिजाइन भएको विश्वमै सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको मोडल हो । विशेषगरी यो गाडी शौखिन मानिसले प्रयोगमा ल्याएका छन् । तर, अहिले फक्सवागनले काठमाडौंको गल्लीमा गुड्ने, परिवारको सङ्ख्याअनुसारको मोडल तथा अफरोडका लागिसमेत विभिन्न मोडल उत्पादन गरेको छ ।
फक्सवागनको नेपाली बजार कस्तो छ ?
नेपालमा नयाँ प्रवेश गरेको गाडीमा फक्सवागनको विक्री सबैभन्दा बढी छ । अहिले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र त्यति उत्साहप्रद छैन । राज्यको करनीति, रियल इस्टेट व्यवसायमा आएको मन्दी तथा बैङ्कको ब्याजदरलगायत कारण यो क्षेत्र पनि मन्दीको मारमा छ । तर, हामीले नेपालमा फक्सवागन ल्याएदेखि नै हरेक महीना विक्री बढिरहेको छ । फक्सवागन गाडी हामीले दुई मुलुकबाट आयात गर्छौं । यसको प्रिमियम मोडल जर्मनीबाट आयात हुन्छ । ती गाडीको मूल्य कम्तीमा पनि ६५ लाख रुपैयाँ पर्छ । त्यस्तै, हामीले भारतबाट पनि फक्सवागन गाडी आयात गर्दै आएका छौं । भारतबाट आउने गाडीको न्यूनतम मूल्य २३ लाख रुपैयाँ पर्छ । डलरको भाउ बढ्दै जाँदा यूरोपबाट आउने गाडीको मूल्य पनि बढिरहेको छ । तर, भारतको मूल्य नेपालसँग समानान्तर हुनाले मूल्यमा खासै परिवर्तन भएको छैन । हालसम्म हामीले ५ सयभन्दा बढी गाडी विक्री गरिसकेका छौं ।
नेपाल भित्रिएको छोटो समयमै ‘फक्सवागन’को बजार बढ्दै जानुको कारण के हो ?
बजार बढ्नुको प्रमुख कारण ‘फक्सवागन’ ब्राण्डप्रति ग्राहकको विश्वास नै हो । सामान्यतः यूरोपियन उत्पादनलाई बलियो गाडीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । नेपालमा विक्री भएका गाडीमा पनि अहिलेसम्म खासै ठूलो समस्या देखापरेको छैन । आकर्षक, किफायती, प्रयोग गर्न सजिलो, विलासीलगायतका कारण फक्सवागनको बजार नेपालमा पनि बढेको हो । त्यस्तै, फक्सवागनको विक्रीपछिको सुविधाले पनि ग्राहकलाई आकर्षित गरिरहेको छ । हामीले कम्पनीकै मापदण्डमा रहेर सुविधासम्पन्न सर्भिस सेण्टर सञ्चालन गरिरहेका छौं ।
फक्सवागनको सर्भिस सेण्टरको विशेषता के हो ?
हामीले १५ हजार वर्गफिट क्षेत्रफलमा सर्भिस सेण्टर सञ्चालन गरिरहेका छौं । यो नेपालकै बढी आधुनिक औजार र दक्ष जनशक्तिसहितको सर्भिस सेण्टर हो । गाडीमा देखिएको समस्याअनुसार हामीले सकेसम्म छिटो मर्मत सुविधा प्रदान गर्दै आएका छौं । साथै, काठमाडौं उपत्यकाभित्र जुनसुकै स्थानमा पनि कम्पनीका कर्मचारी पुगेर मर्मत गरिदिने सुविधा छ । आवश्यक परेमा उपत्यकाबाहिर पनि उक्त सुविधा उपलब्ध गराउन सक्छौं । यसका लागि हामीसँग कम्पनीबाटै तालीम लिएका दक्ष जनशक्ति छन् । हामीसँग फक्सवागनका हरेक मोडलका लागि ब्राण्डेड पार्ट्स पनि उपलब्ध छ । यी विविध सुविधाका कारण ग्राहकले हाम्रो सर्भिस सेण्टरको सेवा मन पराएका हुन् ।
नेपालको सडकमा अहिले पनि फक्सवागनको बिटल्सस मोडल गुडेको धेरै देख्न पाइन्छ, आधुनिक मोडललाई ग्राहकले कत्तिको मन पराएका छन् ?
बिटल्सस मोडलसँग ग्राहकको भावनान्मक सम्बन्ध पनि जोडिएको हुन्छ । यो सन् १९३९ मा डिजाइन भएको विश्वमै सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको मोडल हो । विशेषगरी यो गाडी शौखिन मानिसले प्रयोगमा ल्याएका छन् । तर, अहिले फक्सवागनले काठमाडौंको गल्लीमा गुड्ने, परिवारको सङ्ख्याअनुसारको मोडल तथा अफरोडका लागिसमेत विभिन्न मोडल उत्पादन गरेको छ । ग्राहकको आवश्यकता तथा क्षमताअनुसारको गाडी उपलब्ध भएकाले पनि नेपालीहरूको रोजाइमा फक्सवागन परेको हो । नेपालका अटोमोबाइल ग्राहकमध्ये करीब ६० प्रतिशतले १५ लाख रुपैयाँबराबर मूल्यका गाडी चढ्छन् । हामीले उक्त रेञ्जको मोडल ल्याउन सकिरहेका छैन । कम्पनीले त्यस्ता गाडी पनि ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
विक्री प्रवद्र्धनका लागि पूजा इण्टरनेशनलले कस्तो रणनीति अपनाएको छ ?
कम्पनीले फक्सवागनका लागि नयाँ ग्राहक खोज्नेभन्दा पनि भएका ग्राहकलाई नै सन्तुष्टि दिने नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । त्यही नीतिका कारण हाम्रा सबै ग्राहक सन्तुष्ट पनि छन् । हाम्रो शोरूम पानीपोखरीमा हुँदा पनि व्यवसायमा खासै फरक परेको छैन, यो हाम्रो नीतिकै कारण हो । जबकि सबैजसो गाडीका शोरूम थापाथलीमा छन् । सन्तुष्ट एक जना ग्राहकले पाँच जना नयाँ ग्राहक थप गर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । फक्सवागनको अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डिङ नै उत्कृष्ट भएकाले हामीले नेपालमा खासै विज्ञापन गर्नुपरेको छैन । अब कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने गरी ब्राण्डिङ गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
कम्पनीले व्यावसायिक प्रयोजनका गाडी विक्रीको योजना बनाएको छैन ?
व्यावसायिक प्रयोजनको गाडीका लागि फक्सवागन कमर्शियल भन्ने छुट्टै शाखा छ । उक्त शाखामा २ सयभन्दा बढी मोडलका व्यावसायिक गाडी छन् । नेपालमा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रायः भारतीय र जापानी कम्पनीका सस्ता मोडलका गाडी चल्तीमा छन् । सस्ता मोडलसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । जर्मन गाडीमा तुलनात्मक रूपमा बढी सुविधा हुनुका साथै यो केही महँगो पनि हुन्छ । त्यसैले, अहिले नै व्यावसायिक प्रयोजनका गाडी ल्याउने सोच बनाएका छैन । तर, केही समयभित्रमा पिकअप भने ल्याउने तयारीमा छौं ।